Kajypolitika (mbola tohiny) | mandimby maharo
Kajypolitika (mbola tohiny)
Posted on 10 August 2012 by Mandimby Maharo
Ho avy hanadina ireo rehetra nanao sonia ny tondrozotra i Marius Fransman. Rehefa tsy nahitana fifanarahana teo amin’ireo roa lahy nalefa nitokana tany Seychelles dia hitarin’ny Sadc any amin’ireo vondrona sy antoko mpiray ombon-antoka amin’ny fampiharana ny tondrozotra ny resaka. Ireto farany izay tena mankasitraka io fanampaha-kevitra io satria matoa izy ireo nanao sonia dia mba anehoany ny fisiany.
Eto izany vao tena raikitra ny kajy politika satria ny fanontanian’ny Sadc dia tsy hijery ny lanja ara-politikan’ireo antoko ireo fa handray ny heviny hitovy lanja amin’ny azy roalahy. Amin’io fakana hevitra io dia tsy mijery izay isan’ny olona mpikambana na izay traikefa politika sy traikefam-pifidianana nosedrain’ilay antoko ny Sadc fa amin’ny maha mpanao sonia azy fotsiny ihany. Iaraha mahalala nefa ny tena lanjan’ny maro amin’ireo antoko nanao sonia iny tondrozotra iny. Maro ireo izay vao noforomporonina sy natsangana mba hanabe isa. Kajy izay efa niainga tany amin’ireny fotoana nizarana ny seza tao amin’ny parlemanta sy ny governamanta ireny io.
Raikitra miaraka amin’izay koa ny fandresen-dahatra azy ireo. Samy miezaka ny haka rariny amin’ireto hafa ireto izy roalahy. Ny fandresendahatra eto dia tsy ny hevitra ihany no atosaka fa ny vola sy ny fampanantenana maro samy hafa koa. Fifandresen-dahatra izay miodikodina eo amin’ny teboka telo : ny fodian’ingahy ravalomanana; ny fahafahany milatsaka ho fidina ary ny tokony na tsia ho azy raolahy hirotsaka ho fidina. Raha ny fanehoan-kevitra aloha hatreto dia tsy misy mametraka olana ny firotsahan’ingahy Rajoelina ary na ireo mpanohitra azy ary dia mampirisika io firotsahany io mba afahan’izy ireo mandrefy azy. Ny fodian’dRavalomanana koa ; miaraka amin’ny fepetra marobe toy ny fanenjehana azy eny amin’ny fitsarana, dia efa manomboka eken’ny rehetra. Fa eo amin’ny ho firotsahan’ity filoha teo aloha ity ho fidina no tena mametraka olana. Matahotra io firotsahany ho fidina io avokoa mantsy ireo izay tsy nanana lanja politika hatrizay nefa manabe orona amin’izay tetezamita izao. Mbola hita tokoa mantsy ny fitiavan’ny olona ity filoha ity na dia efa 3 mahery ary no tsy naha-teto an-toerana azy. « Tena tsy niova ilay rangahy » hoy ny Fat teny ampahatongavany avy any Seychelles ny 09 aogostra. Tena tsy niova marina fa mbola ilay rangahy nanana olona maro tao ambadikany 3 taona lasa izay ary mbola ilay rangahy nanana tanjona mazava fa tsy mpanao fa ho any fa ho any.
Mandrapaha tonga ny fotoana hanadinan’ny vahoaka azy ireo dia aleo aloha hifanintsana ao ireo mpanao politika ireo. Rehefa ho avy izay fotoana izay dia tsy ireo ihany no hamoahany ny heviny fa ho tsarainy eo koa ireo mpanelanelana iraisam-pirenena sy izay rehetra niditra tao anatin’uty krizy malagasy ity. Ny vahoaka mantsy tsy mba mahay manao kajy politika fa ny manisa ny kapoaka miditra ny vilaniny ny kajy mba hainy.ka raha ho vy ny fifidianana dia ho ainy koa ny mikajy izay vato ho arotsany ho an’izatsy na izaroa.
Tags: Madagasikara, Marius Fransman, politique, SeychellesCategories: politique